ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »9ဆန်ဖရန်စစ္စကိုကနေရက်စွဲများလူတိုင်းတွင်သွား
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဇန်နဝါရီ. 13 2021 |3မိဖတ်ပြီးသား
San Francisco မှာလူတွေကကိုမှန်ကန် Romantic များမှာ; သူတို့တစ်တွေစုံလင်သောနေ့စွဲသို့ရက်စွဲတစ်ခုဖွင့်ဖို့ဘယ်လိုသိ. သို့သော်, မွို့၌ရက်စွဲတစ်ခုအပေါ်သွားကြဖို့ဤမျှလောက်များစွာသောကြီးမြတ်သောနေရာများနှင့်အတူ, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ချိန်းတွေ့အစီအစဉ်မှားသွားကြဖို့ခက်ပါတယ်. San Francisco ကဖိနပ်ထဲမှာကိုးရက်စွဲများလူတိုင်းနှင့် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးမှုများအောက်ကအပိုင်းပေါ်သွား.
1. မှော်ဘတ်စ်ကား SF အပေါ်တစ်ဦးစီးနင်း
မှော်ဘတ်စ်ကားတစ်ဦးပေါ်တွင်သင်ယူပါလိမ့်မယ် 90 ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမိနစ်စိတ်အပန်းဖြေခရီးစဉ်. ဒီစိတ်လှုပ်ရှားစရာမာလ်တီမီဒီယာခရီးစဉ်အတွင်းမှာတော့, အတာပီယဉ်ကျေးမှုနှင့် 1960 အများအပြားထိုကဲ့သို့သောအခြားမျက်နှာစာအကြောင်းကိုပြောဆိုသောအားဖြင့်သင်တို့ကိုသကျသခေံရလိမ့်မည်. အဆိုပါခရီးစဉ်ကိုမြတ်နိုးဖို့သင်နှင့်အမှတ်တရများသင့်ရဲ့မိတ်ဖက်စာရေးနှစ်ဦးစလုံးအားငါပေးမည်.
2. ထိုသမုဒ္ဒရာသဲသောင်ပြင်မှသူမ၏ ယူ.
သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးပြင်ပတွင်ဝါသနာအိုးသည်ဆိုပါက, သူမကျိန်းသေဤအရပျခစျြလိမျ့မညျ. သမုဒ္ဒရာသဲသောင်ပြင်ရွှေနိုင်ငံတော်ပန်းခြံအနီးတည်ရှိသည်; သင်ဒီမှာသုံးဖြုန်းလိမ့်မယ်အချိန်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်ပျော်စရာ-ဝပြောစွာဖြစ်လိမ့်မည်. ထိုကဲ့သို့သောစွန်ပျံသန်းအဖြစ်လှုပ်ရှားမှုများအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူပါ, တောင်တက်, နှင့်စက်ဘီးစီးခြင်း; ပြီးတော့သင်အကြိုက်ဆုံးကော့တေးတစ်ခွက်ကိုကျော်အတူတူအချို့အားမစိုက်ရနာရီပေါင်းများစွာ.
တံငါရဲ့ဆိပ်ခံဗောတံတားသောနေ့ရက်ကာလကိုတဆင့်အားလုံးနီးပါးအလွန်အမင်းလူစည်ကားနေဆဲ; သို့သော်, သင်တို့ရှေ့မှာအရပျကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့စီမံခန့်ခွဲနိုင်မယ်ဆိုရင်9နံနက်။, အမှန်သင်နှင့်သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေအတွက်တောင့်အဖြေကိုပူဇော်ပါလိမ့်မယ်.
တစ်ဦးချစ်ဘွယ်သောလက္ခဏာနံနက်စာဖူး, ပင်လယ်နှင့်ပင်လယ်ခြင်္သေ့ထွက်စစ်ဆေးနှင့်နေ့ဆိပ်ခံတံတားသို့သွားရတိုးတက်လာတာနဲ့အဖြစ် 39 အချို့စျေးဝယ်များအတွက်. ရက်စွဲအနည်းငယ်ပိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်စေရန်, သင်သည်လည်းပြည်ထောင်စုရင်ပြင်မှတံငါရဲ့ဆိပ်ခံဗောတံတားကနေ cable ကိုကားတစ်စီးစီးယူနိုင်ပါသည်.
ဒါကြောင့်တစ်ဦးကျဆုံးသည့်ရက်စွဲင် အကယ်., အ SF Bay Area တစ်ခုဆိုင်ကယ်စီးနင်းသွား. သငျသညျကိုတွေ့ကြုံခံစားလိမ့်မည်အရာအားလုံးအချစ်ဇာတ်လမ်း၏တစ်ဦးထိတွေ့ရလိမ့်မည်; ကအရောင်အဆင်းဖြစ်ကုန်အံ့, ထိုလေပြေဒါမှမဟုတ်ရွှေလင်းတရှိရာသို့ညွတ်အနံ့.
အဲဒီအစားပုံမှန်ရုပ်ရှင်နေ့စွဲတွေအတွက်သွား၏, ကက်စထရိုကဇာတ်ရုံမှဦးခေါင်းကို, တစ်ဦးဂုဏ်ပြုရုပ်ရှင်နန်းတော်နှင့် San Francisco မှာလူကြိုက်အများဆုံးသမိုင်းဝင်အထင်ကရအဆောက်အတယောက်. repertory ရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်များ hosting ထက်အခြား, ဒါကြောင့်လည်းအထူးဖြစ်ရပ်များ၏အကွာအဝေး stages.
6. Forbes မဂ္ဂဇင်းကျွန်းအတွက်နာရီအနည်းငယ်ဖြုန်း
ဒါဟာဒီထက်ပိုရင်ခုန်စရာမရနိုင်; သင့်ရဲ့ချစ်ရာသခင်သည်နှင့်အတူ Forbes မဂ္ဂဇင်းကျွန်းသို့သွားရောက်နှင့်သင်ဧကန်အမှန်အချို့သောကြီးမြတ်ပို့စ်ရက်စွဲအမှတ်တရများရှိသည်လိမ့်မယ်.
ထိုလေပြေကဒီမှာမကြာခဏတော်တော်အအေးဖြစ်သကဲ့သို့သူမ၏နှင့်အတူဂျာကင်အင်္ကျီကိုရောက်စေရန်သင်၏ဇနီးသို့မဟုတ်မိန်းကလေးတစ်မိတျဆှေအမေး. သငျသညျသူမ၏သတိပေးဖို့မေ့လျော့နေလျှင်, စိတ်မပူပါနဲ့; သင့်ရဲ့ဂျာကင်အင်္ကျီသို့မဟုတ်အင်ျကြီကိုပူဇော်သက္ကာဘို့တခုသည်အို, ဒါပေမယ့်အမျိုးသမီးတွေအောင်၏အမှန်တကယ်ချိုမြိန်လမ်းချစ်ရသူခံစားရ.
ပူပြင်းတဲ့လေထုပူဖောင်းထဲကနေ San Francisco မှာသကျသခေံနေဝင်ချိန်; သင့်ရဲ့ချစ်ရာသခင်သည်အလိုတော်ကိုဧကန်အမှန်အသင့်ရဲ့စွန့်စားရှေးခယျြမှုနှင့်အတူအထင်ကြီးခံရ. ဒီအထူးအခါသမယကျင်းပနေများအတွက်စုံလင်သောချိန်းတွေ့စိတ်ကူးဖြစ်ပါသည်. အလွန်ကြီးစွာသောမုန့်ညက်နှင့်အတူ outing နှင့်တစ်ဦးရှန်ပိန်ကင်ရပ်တန့်.
8. Crissy ဖျော်ဖြေမှုတစ်ခုခရီးစဉ်
Crissy ကွင်းဆင်းသင်တစ်ဦးရင်ခုန်စရာနေ့စွဲသို့ပုံမှန် outing ဖွင့်ဖို့အမျိုးမျိုးသောအခွင့်အလမ်းများကိုဆက်ကပ်လိမ့်မည်. နေရာ, သောတစ်ချိန်ကအမေရိကန်ကြည်းတပ်လေယာဉ်ကွင်းဖြစ်ဖို့အသုံးပြု, ယခု Golden Gate အမျိုးသားအပန်းဖြေဧရိယာသို့ထည့်သွင်းခဲ့.
Crissy ဖျော်ဖြေမှုမှာ, သင်တစ်ဦးစွန်ပျံသန်းနိုင်သည်, အနီးအနားရှိကော်ဖီဆိုင်မှာကော်ဖီခွက်များ, သို့မဟုတ်ပဲသင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်ကိုညင်ညင်သာသာ crashing လှိုင်းတံပိုးများနှင့်အသက်ရှုမှားကမ်းရိုးတန်းရှုခင်းကိုကြည့်နှင့်အတူအချို့သောတိတ်ဆိတ်နာရီပေါင်းများစွာ.
ဤအရာသည်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ချိန်းတွေ့စိတ်ကူးဖြစ်ပေါ်လာစေခြင်းငှါ,, ဒါပေမဲ့အခါသင်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုလှေကားလမ်းလျှောက်၌ရှိကြ၏ဧကန်အမှန်တစ်ဦးမဖြစ်မနေ-ကွိုးစားချိန်းတွေ့ option ဖြစ်တယ်. အဆိုပါမြို့ထူးခြားသောနှင့်ကြော့လှေကားတစ်အရေအတွက်နေရာဖြစ်သည်; ဤသူလှေကားအများအပြားအဝေးကနေတည်ရှိသည်နှင့်တစ်ဦးရလဒ်အဖြစ်တော်တော်ရင်ခုန်စရာနောက်ခံကားများဖြစ်ကြောင်း. အလွန်ကြီးစွာသောချိန်းတွေ့အစက်အပြောက်ပါစေနှစ်ခု SF လှေကားလိုင်ယွန်လမ်းအဆင့်များမှာ, နှင့် 16 ရိပ်သာလမ်း Tile ခြေလှမ်းများ.
ဒါတွေဟာကိုယ့်ကို San Francisco မှာကိုးရက်စွဲများလူသွားလက်လွတ်ဘယ်တော့မှသင့်ပါခဲ့ကြ. အဘယျသို့သူတို့ကိုအကြောင်းကြီးမြတ်ရဲ့သင်တို့သည်ဤရက်စွဲများ၏မည်သည့်အဘို့ဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာ၏သုံးဖြုန်းဖို့လိုအပ်မည်မဟုတ်ကြောင်း, သို့သော်သင်သည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်အတူအချို့သောအမှတ်ရစရာများနှင့်အသည်းအသန်အချိန်ဖြုန်းရလိမ့်မည်.